Izindawo ze-Casino eziku-inthanethi zaseBrazil | Amakhodi E-inthanethi e-Casino
(233 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Akulula kangako ukuza kubagembuli baseBrazil. Kuze kube ngo-1946, izinhlobo eziningi zokugembula ezweni zazivunyelwe. Kodwa-ke, kwathi nje eseqala ukuphatha umongameli omusha uDutra, wonke amakhasino wendabuko nokuzijabulisa kwezokugembula, kufaka phakathi ukubhejela ezemidlalo, avinjelwa. Njengokuhlukile kuvunyelwe ukubheja kuphela ekugijimeni kwamahhashi nakulotho. Kusukela lapho, kuncane okushintshile, futhi imikhawulo isanciphisa abadlali.
Ngawo-1960, uhulumeni wakwazi ukuthatha umzamo ophumelelayo wokuvala wonke amakhasino angekho emthethweni. Ngenhlanhla, selokhu kwasuswa ukuvinjelwa kwemishini yokugembula ngo-1990, futhi namuhla kunabangaphezu kuka-100,000 2004 ezinkulungwaneni ezimbalwa zezikhungo zebhingo. Kukhathalogi yethu eku-inthanethi yokugembula ukuthi imidlalo yebhingo nayo isemthethweni eBrazil. Kodwa-ke, bavinjelwe okwesikhashana ngo-9. Ngenxa yehlazo ngesihloko sokufumbathisa okubandakanya uhulumeni ukuvinjelwa ibhingo ezinyangeni eziyi-XNUMX.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 ze-Brazilian Online
Ukugembula ku-inthanethi eBrazil
Ngaphandle kweqiniso lokuthi ireferensi ethile yokugembula ku-inthanethi (njengoba kushiwo emthethweni ngo-1946 izingosi zomuntu siqu online ukugembula eBrazil, ukubheja ku-inthanethi kwezemidlalo naku-inthanethi yebhingo), nokho ukuzijabulisa okunjalo kwi-Intanethi eBrazil akuvunyelwe. Abagembuli baseBrazil bangadlala ku-inthanethi, kepha kulokhu kufanele basebenzise izingosi zakwamanye amazwe njengemithetho yokugembula online eBrazil, abakwenqabeli ukusetshenziswa kwezindawo zabasebenza kwamanye amazwe.
Ngo-2012, iKomidi LeSenate leSayensi, Ubuchwepheshe, Ukuqamba kanye Nokuxhumana lenza isiphakamiso sokuvimba konke okwenziwe ngamakhadi esikweletu kumasayithi aku-inthanethi okugembula eBrazil, okungavumeli abadlali bendawo ukuthi bajabulele izinsizakalo zokugembula kwi-Intanethi. Kodwa-ke, lolu daba lusabhekwa. Okwamanje, abadlali baseBrazil bayaqhubeka nokubheja ku-inthanethi kumasayithi opharetha bakwamanye amazwe, abanye babo abanohlobo lwamakhasi abo lwesiPutukezi. Kuze kube manje, imakethe yokugembula eku-inthanethi eBrazil ingamadola ayizigidi ezingama-265.
Amasayithi e-casino e-intanethi avuma abadlali baseBrazil
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela eBrazil, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola ukuzijabulisa okuhlukahlukene kusuka kumishini ye-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile abanjengoNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi.
Ungakwazi futhi ukufunda ukubuyekezwa kwethu kwamasayithi we-casino e-intanethi, ukuqaphela ukukhushulwa okuhle kakhulu kwe-intanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakalayo kubadlali baseBrazil.
Amasayithi we-poker e-inthanethi abamukela abadlali baseBrazil
Bona uhlu lwamasayithi e-poker aku-inthanethi amukela abadlali abavela eBrazil, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Jabulela ukuhlukahluka okuningi kwe-roulette, i-blackjack, i-hold'em, neminye imidlalo yamakhadi. Ngeminye imininingwane, funda izibuyekezo zethu zamasayithi we-poker aku-inthanethi amukela abadlali abavela eBrazil.
Amasayithi e-inthanethi ezokubheja ezemidlalo ezithatha abadlali baseBrazil
Bona uhlu lwezingosi zokubheja eziku-inthanethi kulo mdlalo, ukuthatha abadlali abavela eBrazil, nokunikela ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Beka ukubheja kwakho, khetha okulungele kakhulu i-Events koeffitsinty yakho phakathi kweziphakamiso zabambalwa ababhuki be-inthanethi eBrazil. Futhi ukuthola eminye imininingwane, bheka kuzibuyekezo zethu zezingosi zokubheja eziku-inthanethi kulo mdlalo, uthatha abadlali abavela eBrazil.
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 ze-Brazilian Online
2.1 Ukugembula ku-inthanethi eBrazil
2.2 Amasayithi e-casino e-intanethi avuma abadlali baseBrazil
2.3 Amasayithi we-poker e-inthanethi abamukela abadlali baseBrazil
2.4 Amasayithi e-inthanethi ezokubheja ezemidlalo ezithatha abadlali baseBrazil
ukubheja okungcono kakhulu